Xildhibaan si qarsoodi ah ku tegtay suuqa Bakaaraha, kadib maxaa dhacay? - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaan si qarsoodi ah ku tegtay suuqa Bakaaraha, kadib maxaa dhacay?
Xildhibaan si qarsoodi ah ku tegtay suuqa Bakaaraha, kadib maxaa dhacay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Sacdiyo Salaad Samatar oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo mida siyaasadeed, xilli haatan lagu jiro marxalad adag oo kala guur ah.
Ugu horreyn Xildhibaanada ayaa sheegtay inay korortay saddexdii sano ee ugu dambeysay amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho, iyada oo tilmaamtay in xaafadaha qaar aysan tagi karin mas’uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda amni darro aawgeed.
Sacdiyo ayaa tusaale u soo qaatay dhacdo la yaab leh oo qabsatay, kadib markii iyada oo wejiga u xiran yahay ay booqatay Suuqa Bakaaraha, waxaana ay shaacisay in markii ay suuqaasi tegtay ay si weyn uga argagaxeen ehelladeeda oo u baqay amnigeeda.
Sidoo kale waxay is-weydiisay, sida ay xilligan ku suura-geli karto doorasho qof iyo cod ah oo ay haatan qorshaheeda wado dowladda, iyada lagu jiro marxaladaasi amni.
“Shaqaalihii dowladda iyo mas’uuliyiinta ma tagi karaan qeybo ka mid ah Muqdisho, cabsi ay ka qabaan amniga awgeed, aniga waxaa maalin hore tagay Suuqa Bakaaraha anagoo wejiga i xirnaa, ehelkeygii waa argagaxeen waxay u dhaheen maxaa halkaan ku keenay?, dowlad sidaa aan Bakaaro u tagi karin sidee doorasho qof iyo cod ku qabanee?”. ayay tiri Xildhibaan Sacdiyo Salaad oo ka mid ah Golaha Shacabka Soomaaliya.
Ammaanka Muqdisho oo u baahan wax ka qabasho ayaa marar badan si weyn loogu dhaliilay dowladda federaalka, mana muuqdo qorshe cad oo wax looga qabanayo.
Hadalkan ayaase ku soo aadaya, iyadoo weerarkii ugu dambeeyey uu shalay galab ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar, kaas oo ay fuliyeen maxaabiis ku jirtay xabsigaasi.